कस्तो छ कोरोना संक्रमित आठ जनाको अवस्था ? « Naya Page
कस्तो छ कोरोना संक्रमित आठ जनाको अवस्था ?
प्रकाशित मिति : 10 April, 2020 7:37 am
काठमाडौं, २८ चैत । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित आठ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरु सबैको अवस्था सामान्य रहेको चिकित्सकले जनाएका छन् ।
नेपालमा हालसम्म नौ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये एक जना निको भइसकेका छन् ।
सेती अस्पतालमा उपचाररत चारजनाकै अवस्था सामान्य भएकाले अहिले भने कुनै औषधि प्रयोग नगरिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।
‘अस्पतालमा भर्ना भएका चारजनाकै अवस्था सामान्य भएकाले अहिले कुनै उपचार चाहिँदैन’, संक्रमितको उपचारको नेतृत्व गरिरहेका चिकित्सक शेरबहादुर कमरले भने,‘व्यवस्थित भयो भने घरमै गएर बस भन्न सकिने अवस्था हो, अरुलाई सार्छन् कि भनेर अस्पतालमै आइसोलेसनमा राखिएको हो ।’ नागरिक दैनिकबाट